आँपको पातको चामात्कारिक फाइदा, कुन रोग लाग्दा खाने ? (विधिसहित) - Medianp.com
आँपको पातको चामात्कारिक फाइदा, कुन रोग लाग्दा खाने ? (विधिसहित)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष २६, २०७३११:४६0	एजेन्सी । हाम्रो घर वरिपरि अायूर्वेदिक उपयोग हुने विभिन्न झारपातहरु भएपनि हामीलाई कुन रोग लाग्दा कसरी खाने भन्ने ज्ञान नहुँदा त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ । त्यस्तै अाज हामी तपाईलाई त्यस्तै अायूर्वेदिक वस्तुको बारेमा जानकारी गराउँछौं जसले एउटा गम्भीर रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
आँपको पातले पनि मधुमेह जस्तो खतरा रोगीहरुलाई लाभदायी हुन्छ । मधुमेह अर्थात डाइबिजिज हेर्दा सजिलै थाहा नपाउन रोगमध्ये एक हो । शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भयो भने त्यसलाई मधुमेह भनिन्छ । यो एक गम्भीर रोग हो किनकी यसले रोगीलाई बिस्तारै अाफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ । त्यसैले मधुमेहलाई साइलेन्ट किलरको रुपमा लिइन्छ । संसारभर मधुमेह रोगी दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । यस प्रकारको बिरामीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अावश्यकभन्दा बढी हुने तथा रक्तकोशिकाले ग्लुकोजलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न दिंदैन । र, शरीरका विभिन्न अंगहरुमा शिथिलता ल्याउँछ ।
मधुमेहको मुख्य कारणहरु
पिसाब बढी लाग्नु
चोटपटक चाँडो निको नहुनु
अाज हामी मधुमेह रोगीहरुका लागि एक सजिलो चमत्कारी घरेलु उपचार विधि लिएर अाएका छौं । यो विधि निकै सजिलो छ । यसमा उपयोग हुने अौषधिमा भिटामिन, मिनरल तथा अन्य तत्वहरु पाइने हुँदा मधुमेह रोगका अलवा अन्य रोगको लागि पनि लाभदायी हुन्छ ।
यस्तो छ तरिकाहरु पहिला १०-१५ वटा अाँपको कलिलो पातहरु टिप्नुहोस् र त्यसलाई भाँडामा हालेर केहीबेर उमाल्नुहोस् ।
उमालिएको आँपको पातलाई एक रात त्यसै छोड्दिनुहोस् ।
भोलिपल्ट बिहान उक्त झोल (पातबाहेक) पिउनुहोस् ।
यसलाई करीब २-३ महिना नियमित सेवन गरेमा नतिजा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ । मतलब यसको प्रयोगले तपाईको मधुमेहको मात्रामा निकै कमी अाइसक्नेछ ।
यसको नियमित प्रयोगले तपाईको मधुमेह मात्रामा निकै कमी अाउँछ ।
स्रोत: वन्ली अायूर्वेद
चलचित्रमा डन बन्दाबन्दै साँच्चै आफूलाई डन सम्झन्छु– भँगेरी डनफिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई